Yurub oo Tahriibayashaa Hub kula Dagaalami Doonto. | Wararka Jubbaland
Wasiirada Difaaca qaar kamid ah wadamada ku midoobey Ururka Midowga yurub ayaa sheegay in ay diirada saari doonaan sidii ay ku joojin lahaayeen qaxootiga kusoo qul qulaayo wadamadooda, waxay doontaba haku qaadatee.
Wasiiirada Difaaca wadamada Austria, Croatia, Czech Republic,Slovakia iyo Slovenia ayaa sheegay in si wada jir ah ay kaga wada shaqeyn doonaan waxa ay ugu yeereen qulqulka qaxootiga kasoo hayaamayo badamo badi Afrikaan ah oo ay Soomaaliya kamid tahay.
“Waxaan qaadeynaa tilaabo wax ku awl ah oo wadamada qaarada yurub ay ka faa”iidi doonaan oo waxaan ka hortagi doonaa qaxootiga sida sharci darada ugu soo qulqulaayo qaaradeyna, xitaa haday noqoto in aan u adeegsano hubka nuucyadiisa kala duwan waa hadii lama huraan noqoto in hub aan adeegsano” sidaasi waxaa yiri wasiirka difaacada wadanka Austria Hans Peter Doskozil.
Isagoo sii hadlaayana waxa uu yiri “Howlgal Milateri oo ka dhan ah qaxootiga ayaan sameyn doonaa maalmaha ma bilaha inasoo aadan bal si aan xitaa u yareyno qaxootigaan qaaradeyna qaribey”.
shir si heer sare ah loo soo agaaasimey oo ay wada qaateyn wasiirada difaaca qaar kamid ah qaarada Yurub ayaa waxa kasoo baxay war qoraal ah oo qeexaya in dhaq dhaqaaqyo Milateri looga hortagi karo qaxootiga qaaradaasi miciin bida.
Dhalinyaro fara badan oo Afrikaan ah ayaa naftooda ku biimeeyo gaarista qaarada yurub haba ugu badnaadaanee Soomaaliya iyo Ereteria , iyagoo qaxar iyo dhibaato kala kulmo sidii ay halkaa ku gaari lahaayeen, tii oo ay usii dheertahay in soo dhaweyn fiican aynan ka helin wadamada yurub inta badaha iyo saxaraha ka badbaada.